စငျကာပူ ထကျ သာပဟေ့! ..စငျကာပူ ကို မွနျမာ ကြျောပွီ (နိုငျငံတကာ ကပါ အသိအမှတျပွုလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ) - MDY News
စငျ ကာပူ ထကျ သာပဟေ့! ..စငျကာပူ ကို မွနျမာ ကြျောပွီ (နိုငျငံတ ကာ ကပါ အသိ အမှတျ ပွုလိုကျ တာ ဖွဈ ပါ တယျ)
ကမ်ဘာ့ နိုငျငံပေါငျး ၁၈၄ နိုငျငံ ရဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ ခံရပွီး ပွနျလညျ နာလနျထူသကျသာလာမှုကို နှိုငျးယှဉျပွ ထားတဲ့ အညှနျး ကိနျး အရ မွနျမာနိုငျငံ က အဆငျ့ ၂၀ နရောမှာ ရပျတညျ နပွေီး စငျကာပူ က အဆငျ့ ၅၁ ပါ တဲ့။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၄ နိုင်ငံ ရဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရပြီး ပြန်လည် နာလန်ထူသက်သာလာမှုကို နှိုင်းယှဉ်ပြ ထားတဲ့ အညွှန်း ကိန်း အရ မြန်မာနိုင်ငံ က အဆင့် ၂၀ နေရာမှာ ရပ်တည် နေပြီး စင်ကာပူ က အဆင့် ၅၁ ပါ တဲ့။
ဒီ အညွှန်းကိန်း ကို တစ်နိုင်ငံချင်းစီ ရဲ့ လူဦးရေ၊ တစ်ဦးချင်း တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ (GDP per capita)၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအမံ၊ ရောဂါကူးစက်မှု၊ သေဆုံးမှုနဲ့ ပြန်လည် သက်လာ ပျောက်ကင်းမှုစတဲ့ အချက်အလက် တွေအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ Global Covid-19 Index (GCI) ရဲ့ အချက်အလက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး DVB သတင်းဌာနက ဖော်ပြထား တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ စတင် ဖြစ်ပွားစဉ်က ရောဂါ သက်သာမှုဟာ အင်မတန် နှေးကွေး နည်းပါးတဲ့အတွက် ပျောက်ကင်းနှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ရှိလို့ စိတ်ပျက်အားငယ် ကြောက် ရွံ့ကြ… အတည်ပြု လူနာ ၂၂ ဦးမှာ ၃ ဦး သေဆုံးသွားချိန်မှာ သေနှုန်းက ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ကျော်သွားလို့ ခံစစ်ကျိုးပေါက်ပြီလို့ အစိုးရကို ဝိုင်းဆဲခဲ့ကြပေမဲ့… အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းတဲ့ အတွက် သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားသူ အရေ အတွက် ဟာ ကူးစက်ခံရသူ အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက်ရဲ့ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ရှိနေပြီး… သေဆုံးသူက ၆ ဦးမှာသာ ရပ်တန့်နေတဲ့အတွက် သေနှုန်းဟာလည်း ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပါတော့ တယ်။
အတည်ပြု ကူးစက် လူနာ တွေ့ရှိမှု ကျဆင်းနေပြီး သေဆုံးနှုန်း က မတက်ဘဲ အောက်နားမှာတင် တန်းနေတာကို အားတက်ဖွယ် တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဟာ စစ်ဆေးချက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ အခြေအနေ မကောင်းခင် အကြောက် တရား စိုးမိုးနေချိန်က ပြည်သူအများစုဟာ လက်ဆေးကြပါ၊ Mask တပ်ကြပါ၊ လူမစုဝေးကြပါနဲ့၊ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို တိတိ ကျကျ လိုက်နာခဲ့ကြတာ ရဲ့ ရလဒ် အသီးအပွင့်ကို ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်တယ်။
အခုအခါမှာတော့ ရလဒ်တွေ ကောင်းလာတာ နဲ့အမျှ မကြောက်ကြတော့ဘဲ New Normal ကို အသားကျအောင် ကြိုးစားရမယ့်အစား နေရာတကာမှာ Old Normal ပြန်ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာကို စိုးရိမ်စဖွယ် တွေ့နေရပါတယ်။ အထူး သဖြင့် လူ အများစု ဟာ ကိုယ်တိုင် Mask မတပ်ကြတော့သလို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စည်းကမ်းချက်အတိုင်း လိုအပ်လို့ Mask တပ်ခိုင်း လက်ဆေးခိုင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ အများပြည်သူ သွားလာရာ ဈေးဝယ်စင်တာတွေက တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင် ပြဿနာ ရှာတာမျိုးတွေကို ကြားသိလာရ ပါတယ်။
ဒီရောဂါ စဖြစ်ခါစက Mask တပ်ဖို့ လို မလို အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု လက်တွေ့ ဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက Mask တပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ကို အဆုံး သတ်ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်လို့ ကုသဆေး ကာကွယ်ဆေး မပေါ်မချင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးနိုင်မချင်း Mask တပ်ခြင်းကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်လို လိုက်နာကျင့်သုံး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
အချုပ်ဆိုရရင်… လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလ က စည်းကမ်း လိုက်နာခဲ့ခြင်း ရဲ့ ကောင်းကျိုး ရလဒ် အဖြစ် အခု ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း ကျဆင်းခြင်းဆိုတဲ့ အောင်မြင်မှု ရလာတယ် ဆိုရင်… အခုလပိုင်းတွေမှာ စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး ရလဒ်တွေကို နောက်လာမယ့် လတွေ မှာ တွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီစာဟာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဒီတိုင်းပြည် ဒီပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ရရှိနေ တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ကို သတိပြုမိပြီး မိမိတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းအား၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအားတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ဂုဏ်ယူတတ်စေဖို့နဲ့ ပန်းတိုင် မရောက်ခင် တက်မထောင်ကြဖို့ သတိပေးလိုတာက အဓိက ဖြ စ်ပါတယ် ။
စီးပွားရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေအရ အပြင်မထွက်ဖို့နဲ့ Social Distancing ကို ထိထိမိမိ တိတိ ကျကျ လိုက်နာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ဒီအချိန်မှာ… အနည်းဆုံး Mask ကို မဖြစ်မနေ တပ်ကြဖို့နဲ့ လက်ဆေးကြဖို့ ဆိုတဲ့ အခြေခံ စည်းကမ်းတွေ ကို ဆက်လက် လိုက်နာရင်း မိမိကိုယ် ကိုယ်ရော သူ တစ်ပါး ကိုရော ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးရင်း ရပြီးသား ပြည်သူ့အောင်ပွဲ ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။